भ्रष्टचारीलाई टिकट नदिए कसरी जितिन्छ चुनाव ? - विवेचना
भ्रष्टचारीलाई टिकट नदिए कसरी जितिन्छ चुनाव ?
September 8, 2017 155 Views
भ्रष्ट, दुष्ट, घुसिया, बलात्कारी, अपहरणकारी, तस्कर, अपराधी… आदि विशेषणले सुसज्जित व्यक्तित्वका धनी महानुभावहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भन्ने कुरा कस्ले कुन स्वार्थपूर्तिका निम्ति संसदीय निर्वाचनको मुखैमा आएर उराल्दैछ ? जत्रै र जस्तै अपराध गरे पनि अदालतले प्रमाणित गरेर, कागज र्पुयाएर सजाय नदिएसम्म कसैलाई अपराधी भन्न पाइँदैन । अदालतले दण्ड दिएर सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि उसको अपराध चार दिनमा चोखिएझैँ स्वत: पखालिएर जान्छ । यसको अर्थ जेलमा बसेका बाहेक खुल्ला आकाश र धरतीमा विचलन गर्ने कसैलाई पनि अपराधी भन्न मिल्दैन । दुनियाँले त्यत्तिकै भनेर – गीत गाएर मात्रै हुन्छ ? यी दुनियाँले भनेका अप्रमाणित अपराधीहरु साँच्चै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने हो भने, राजनीतिमा छिर्न नपाउने हो भने अन्त कहाँ जानु ? ठाउँ देखाइदिनु र्पयो नि ? बाटो अतिक्रमण गरेर पसल थाप्नेहरुलाई त त्यहाँबाट हटाउन खोज्दा पुलिससँगै आइलाग्न खोज्दै हामीलाई बस्ने ठाउँ देखा भन्छन् भने राजनीतिकर्मीलाई पनि चुनाव लड्न नपाउने हो भने अर्को क्षेत्र देखाइदिनु र्पयो नि ! आदि… के-के जाती भन्दै एकजना नेता रेडियोमा अन्तरवार्ता दिइरहेका थिए ।
चुनावको मुखमा आएर यस्ता गेजु गाँजे, गुल्चे कुरा निकालेर कसै-कसैले हल्ला मच्चाउन थालेका छन् । सोझा सिधा मान्छेले यसो कुरो सुन्दा ठिकठिकै लागे पनि यसभित्र ठुलो षड्यन्त्र छ । खतर्नाक राजनीति छ । विरोधीहरुको कपट लुकेको छ । यस्ता सस्ता बजारे हल्ला फिजाएर जनतालाई अल्मल्याएर आफूतिर मत आकर्षण गर्ने धुर्त बुद्धि मात्रै हो यो भने उनी भन्दै थिए ।
कुनै समयमा कसैले र्गयो होला केही भ्रष्टाचार ! कुन मानसिकतामा, कस्तो परिस्थितिमा, कति मान्छेलाई साँधेर, मुस्किलले केही र्गयो भन्दैमा जिन्दगीभर चुनाव लड्न नदिनु ? सधैँ छि: छि: दुर दुर गर्नुपर्छ भनेर कुन नियम कानुन विधानमा लेखिएको छ ? राजनीतिमा त्यस्तो अलिअलि भइहाल्छ । यस्ता कुरालाई नो माइण्ड गर्नु पर्दैन ? भ्रष्टाचार जस्तो जाबो कुरालाई अपराध मान्ने हो भने कसरी चल्छ राजनिति ! कसरी बच्छ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र ? हाम्रो जस्तो पार्टीमा यस्ता मान्छेलाई अपराधी मान्ने हो भने उम्मेद्वारको अनिकाल लाग्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार अपराध हुँदैन । यो स्वभाविक कुरा हो । छिमेकी मुलुकतिर पनि कत्रा कत्रा भ्रष्टहरुले निर्वाचन लड्ने गरेको अभ्यास हामी पाउँछौँ । यो एउटा सामान्य परम्परा हो । यस्ता छोटामोटा कुरा कोरलेर मुलुकलाई अल्झाउन पाइन्छ ? भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न दिनु हँुदैन भन्ने कुरा प्रतिगमनकारी हो, पञ्चायत फर्काउने, राजा फर्काउने कुरा हो । हो, यस्ता कुरा उछाल्ने मान्छेलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेलाई पनि अख्तियारले कार्यवाही गर्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकार, मौलिक हक, वैयक्तिकता, निर्बन्ध, स्वच्छन्दता, स्वतन्त्रता अपरिहार्य कुरा हुन् । कसैले भ्रष्टाचारै गरे पनि कसैले उजुरी गरेन, फउ परेन, प्रमाण पुगेन, घुस लिएको भरपाई फेला परेन भने त्यो उसको बठ्याइँ हो, चलाखी हो, राजनीति हो । दुनियाँले रिस गरेर हुन्छ ? कुनै एक समयमा भ्रष्टाचार र्गयो भन्दैमा जिन्दगी भर उम्मेद्वार बन्नबाट बञ्चित गर्दा उसको बुढेसकालको मानवअधिकार हनन हुँदैन ? यो सब विरोधी बेइमान, राष्ट्रघाती स्वार्थीहरुले चलाएको चुनावी प्रोपोगण्डा मात्रै हो भनेर ती नेता अस्पष्टीकरण दिइरहेका थिए ।
देशमा कस्ता कस्ता योग्य, दक्ष, शिक्षित, विद्वान, सक्षम मान्छेहरुले भ्रष्टाचार गरेका होलान् । त्यसलाई अपराध मानेर साँच्चै निर्वाचनबाट बञ्चित गर्ने हो भने के ढाँक्रे, हली, गोठाला, घाँसी, किसान, मजदुरहरुलाई स्वच्छ र निरपराधीका नाउँमा सांसद नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने त ? यिनले विदेशमा गएर विद्वानहरुले अंग्रेजीमा लेखिदिएको वाचन गर्न सक्छन् ? निकै मै हुँ भन्नेहरुले त अंग्रेजी पढ्न नजानेर देशकै शिर निहुराइ दिन्छन् भने अरुको के दशा होला ! देश चलाउन खेलाँची छ ?
संसारमा खोजी नै गर्ने हो भने भ्रष्टचारीहरु निर्वाचन लडेको प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छ । भ्रष्टाचार भन्ने कुरो कहिले काहीँ घटबढ हुने मात्रै हो हट्न चाहिँ कहिल्यै हट्तैन । अझ मलाई नै सोध्नु हुन्छ भने त, भ्रष्टचार हट्नु पनि हुँदैन । हात चाट्न नपाए भोलिदेखि कसले मह काड्छ । राजनीतिमा कसरी आकर्षण बढ्छ, कसरी प्रभाव जम्छ ? अहिले देशमै थामिएर बसेका यिनै राजनीतिक समाज र कर्मचारी समाजका मान्छे छन् । यी पनि सर्वसाधारण जस्तै खाडी राष्ट्रतिर भाँसिए भने देश कसले सञ्चालन गर्छ ? कृषकका खेत बाँझिए झैँ राजनीति पनि बाँझिदैन ? त्यसै त अहिले राजनीति पनि खेती जस्तै कसैलाई अँधिया-ठेक्का दिने बेला भइसकेको छ । अपराधी भ्रष्टहरुलाई निर्वाचन लड्न नदिने भन्ने कुरै आउँदैन बरु मुद्दासुद्दा हालेरै भए पनि अदालतबाट सेर्गेम गराएर चोख्याएर भए पनि चुनावमा भिडाउनु पर्छ । राजनीति समाजमा स्वच्छ मान्छे छैनन् भने भएकैलाई स्वच्छ पार्नु परेन ! वाइयात् कुरा गरेर मात्रै हुन्छ ? भन्दै उनी अन्तरवार्ता फिट्तै थिए ।
भन्नलाई पो सजिलो छ त ! भ्रष्टाचार गरेर पैसा सोहेारेर थुपार्न नसक्ने मान्छेले अहिलेको निर्वाचन कसरी लड्न सक्छ ? भिटाको दाम बढेझैँ, महँगी आकाशिए झैँ उम्मेदवारको टिकटको दाम पनि छोइनसक्नुको छ । पार्टीलाई चन्दा टकर््याउनु र्पयो, नेता नेतिनीलाई सिराने लाइदिनु र्पयो । टिकट पाएर मात्रै हुँदैन सारा दुनियाँलाई भोज भतेर लाउनु र्पयो, खोया खाजा गराउनु र्पयो, पार्टीका छाप लागेका गन्जी कट्टु बाँड्नु र्पयो । वर्षाको समयमा चुनाव भए छाता-रेनकोट, हिउँदमा भए ज्याकेट वितरण गर्नुर्पयो । अर्को पार्टीको सक्रिय कार्यकर्तालाई पाँच-सात मुठा घाँस हाल्दिएर मुख बुजो लगाएर निस्क्रिय बनाउनु र्पयो । फेटावाला तिघ्रे, पाखुरे, ठिटाठिटीहरुको भट्भटेमा तेल हाल्दिनु र्पयो । यतिले मात्रै हुँदैन मतदाताका हातमा दुई-तीन हजार नहाल्दिए उसले किन मत दिन्छ ? सबैमा यस्तै बानी परेको छ । यसरी सबैलाई प्रफुल्ल बनाएर मात्र निर्वाचन जित्न सम्भव छ । गरिबगुर्वा, निर्धन, थाङ्ने, हरिनाशे, झुत्रेहरुलाई स्वच्छ सक्षम छन् भनेर टिकट दिनु हो भने गरिब बाहुनलाई बुढो हात्ती दान दिए जस्तै हुन्छ भनेर आफ्ना बलिया तर्क नेता पेश गर्दै थिए ।
रेडियो पत्रकारले नेतालाई घुमाई घुमाई सोध्यो । तर पनि नेताको कुतर्कका अगाडि रेडियो पत्रकारको तर्कले हार खाइरहेको थियो । उम्मेद्वार भनेको जित्न सक्नेलाई दिनुपर्छ । पैसा नभएको सामान्य मान्छेले चुनाव जित्नै सक्तैन । गुण्डा, डन, तस्कर, माफियाहरुको सन्तुलन मिलाएर चुनाव जित्न सजिलो छ ? भ्रष्टाचारै नगर्ने सँग त्यत्रो बिघ्न पैसा कहाँबाट आउँछ ? खोजीखोजी भ्रष्टलाई नै टिकट दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई टिकट नदिए कसरी जितिन्छ चुनाव ? पार्टीलाई, नेता नेतिनीलाई कसले पैसा बर्साउँछ ? स्वच्छ मान्छेको उपाय छैन । भ्रष्टाचार गर्ने चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने भ्रष्टाचार गर्ने भनेको राजनीतिक चक्र नै हो … इत्यादि के-के भनेर अन्तरवार्ताकै क्रममा नेता बौलाउन थाल्यो । मलाई पनि कुरा सुनेर रनाहा चल्यो, रेडियो प्लाट्ट मार्दिएँ ।
भोलिपल्ट बिहान समाचार सुनेपछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ । भ्रष्टाचारी अपराधीलाई निर्वाचन लड्नै नदिने कानुन पास भयो अरे ! अब देश बर्बाद हुने भयो । पैसाको सिराने लाएर सुतेका, निर्वाचनमा मुठी खोलेर खर्च गर्न सक्ने भ्रष्टहरुलाई चुनावबाट बञ्चित गरेपछि आफ्नो पसिनाकै कमाइ त कसले फुक्न सक्छ ? फेरि भ्रष्टाचार गर्न साँच्चै नपाउने हो भने चुनावमा करोडौँको लागनी कुन मुर्खले गर्ला ? जाबो एक डेढ लाख रुपैयाँ त सिमानामा सुपारीका पोका ओसार्ने मजदुरले पनि कमाउँछन् । यस्तै हो भने अब संसदमा उठ्ने, मन्त्री बन्ने मान्छेको अनिकाल लाग्छ । प्रधानमन्त्री पनि स्कूलको हेडमास्ट, क्याम्पसको चिफ जस्तो घाँडो हुन्छ । खाई नपाई छालाको टोपीलाई ! देशलाई नसुहाउने कानुन पास गरेछन् ।
Previous दसैँतिहारको अवसरमा एनआरएलको नि:शुल्क सेवा
Next यात्रुलाई सास्ती नदेऊ (सम्पादकीय)
नेपालमा रेल ल्याउँदा भाले पोथी मिलाएर ल्याउनु पर्छ !